Chimamanda Ngozi Adichie's Best Books | Zvazvino Zvinyorwa
Mabhuku akanakisa naChimamanda Ngozi Adichie
Alberto Makumbo | | Vanyori, Type, Literature, Novela
Kwemazana emakore, tsika yeAfrica yakadzvanyirirwa nemasimba ekunze akaedza kumisikidza yavo yenyika mune yakawanda yekondinendi nhema. Uye ikozvino, muzana ramakore reXXI, apo manzwi akasimudzwa kuti ataure chokwadi chezuro, nhasi namangwana, neNigerian Chimamanda Ngozi Adichie ari mumwe wevamiririri vakuru veiyi nyowani. Tinokukoka iwe kuti uzive Chimamanda Ngozi Adichie mabhuku akanakisa kuitira kuti uzvi nyurise mune dzese dzenyaya dzakaomeswa nechando munguva uye kuti nhasi vhurike kune nyika kuti itore kuenzana mune dzese pfungwa.
1 Mabhuku akanakisa naChimamanda Ngozi Adichie
1.1 Ruva repepuru
1.2 Hafu yero zuva
1.3 Chinhu chakakomberedza mutsipa wako
1.5 Tese tinofanira kuva feminists
1.6 Ngozi yenyaya imwe chete
Akazvarwa mwanasikana wechishanu wevaIgbo vakaroora vaviri kuNigeria, Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria, 1977) akararama kwehuwandu hwehudiki hwake muimba imwechete iyo yaimbove yemunyori ane mukurumbira. Chinua Achebe. Simba rakasimbisa kusadzikama kwemumwe mudiki Adichie uyo pazera remakore gumi nemapfumbamwe, akawana bhezari yekudzidza Kutaurirana nePolitiki Sayenzi kuDrexel University muPhiladelphia. Kurovedza uko kwaizobatana nemakosi akasiyana ekunyora ekunyora uye degree raTenzi muAfrican Studies kuYale University.
Kwemakore, Chimamanda ave mumwe we mazwi makuru ekunyora eAfrica, kunyanya nekuda kwekugona kwake kurondedzera zviitiko zvese kubva pachinzvimbo chakarukwa pakati pe Africa neUnited States. Pakati penyaya dzenyaya dzavo, zvechikadzi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose zviri pakati pezviitiko zvinowanzoitika, vachiita misangano yavo yeTed Talk iyo yakatsaura chinzvimbo chavo munyika yepasi rose inoda maonero matsva.
Izvi ndizvo Chimamanda Ngozi Adichie mabhuku akanakisa:
Yakabudiswa muna 2003, Ruva repepuru yakava Adichie yekutanga kurova kukuru. Iyo nyaya yaive nehama mbiri, Kambili naJaja, inotongwa nemamirionea uye vanonyanyisa baba. Vachionekwa kumeso kune hukasha hweudzvanyiriri hweNigerian, vese varume vechidiki vachachinja maonero avo munyika mavo mushure mekupedza mazuva mashoma mufurati inodziya yamainini vavo Ifeoma. Innate sampuro yekugona kwemunyori kuongorora dambudziko remuAfrica uye kuimonyora senhengo yechizvarwa chitsva, Ruva Rakajeka chiitiko chakangwara pachikamu chemunyori mukuyedza kuumba nhoroondo yenyika yake. Yenyika yose.
Hafu yero zuva
Musi waMay 30, 1967, dunhu reNigeria reBiafra rakawana kuzvitonga kubva kune imwe nyika mushure mehondo yevagari vemo yakauraya zviuru zvevanhu. Kunetsana kwakaongororwa mu Hafu yero zuva kuburikidza nevanhu vatatu: Ugwu, mushandi wepurofesa weyunivhesiti, Olanna, mudzimai wapurofesa, naRichard, wechidiki wechiRungu anodanana nehanzvadzi yaOlanna isinganzwisisike. Maitiro anozununguswa nehondo uye anofanirwa kuchinjika kunyorerwazve kwenhoroondo yenyika kuburikidza nemisoro yakadai sevakadzi, kuzivikanwa kana mhedzisiro yemasimba ekunze mumashure mekoloni Africa. Iyo inoverengeka akakunda iyo Orange Prize yeFiction in 2007.
Chinhu chakakomberedza mutsipa wako
Rakaburitswa muna2009, muunganidzwa uyu wenyaya pfupi unoburitsa hunhu hwekunyora hwaAdichie muchimiro chayo chakachena. Nhoroondo gumi nembiri dzinotaura nezvechokwadi chemuAfrica, vevatorwa vanosvika muUnited States uye vasingazive kuti chii chinonzi The Lion King, chehama dzinokura nekunyarara nyaya dzekare kana vakadzi vanomirira muEmbassy yakafukidzwa nenhunzi dzakanamatira kuhara yetariro. Iri basa rakaringana rekupinda naro zvakasikwa zvemunyori uye nekunzwisisa akasiyana maficha muhupenyu hwevamwe maNigeri avo vanorota kusvika kune iyo "nyika yechipikirwa" inonzi America. Zvirokwazvo imwe ye Chimamanda Ngozi Adichie mabhuku akanakisa.
Ungada here kuverenga Chinhu chakakomberedza mutsipa wako?
Ifemelu naObinze vaviri vechidiki vekuNige murudo uyo rimwe zuva vachasiya nyika yavo kuenda kuUnited States pamwe chete. Nekudaro, ndiIfemelu anowana vhiza yekusvetukira kune rimwe divi reAtlantic. Mushure mekusvika kuMadokero, uye nechinangwa chekudzidza kuyunivhesiti, mukadzi wechidiki uyu anofanira kusangana nekasaruro kekupedzisira muUnited States maererano nevanhu vane ganda rake. Americaanah, zita rinoreva izwi rekuti maNigeri kureva vanhu vekumba kwavo vanodzoka kubva kuUnited States nemhepo yehukuru, rakaburitswa muna2013 richive hunyanzvi hwaAdichie. Iyo nyaya inokwanisa kuongorora mukati mezvipingamupinyi zvakawanda zvinounzwa nemu Africa kuti azviwanire mune imwe nyika, kuyedza kuzadzikisa chiono chake cheupenyu hwakabudirira. Iyo inoverengeka, inodzokororazve imwe yematunhu ekutanga mune zvinyorwa zveAfrican Literature, akahwina mubairo National Book Vatsoropodzi Circle Mubairo muna 2014 uye ichagadziriswa kuita miniseries inotarisana naLupita Nyong'o.
Tese tinofanira kuva feminists
Munguva yake 2012 Ted Hurukuro, Chimamanda akataura nenyika ye feminism, yeiyo yakaenzana uye iyo yairemekedza murume. Kuenzana kusinga sanganise nekushamisika kutarisa kweLao valet kana mukadzi akamupa tip kana weanogamuchira paanoona munyori muzvitsitsinho zvakakwirira achifamba nemuhotera horo. Kutaura kwakakunda kuombera kweruzhinji kuti, gare gare, kuve inounganidzwa fomu rekuyedza Muizvi Tese tinofanira kuva feminists, bhuku rakareruka serine simba rakanakira verenga panguva yekufamba nendege.
Ngozi yenyaya imwe chete
Nepo isu tese tichifanirwa kuve vechikadzi vanotora hurukuro yaAdichie panguva yake Ted Talk 2012, rake rekupedzisira bhuku rakaburitswa muSpain, Ngozi yenyaya imwe chete, teerera kutaura kwemunyori yakaitwa muna 2009. Chinyorwa chinotaura kudiwa kwete kwekuderedza munhu kana nyika kune imwe nyaya, kuyedza nzwisisa ese maonero uye shanduro dziripo zvimwe chete. Muenzaniso uripo mumusangano wekutanga wemunyori newaaigara naye paYunivhesiti yePhiladelphia. Akashamiswa nekutaura kwake kwechirungu uye akabvunza kana akateerera mimhanzi yedzinza paWalkman wake. "Ndiri kuteerera Mariah Carey," Adichie akapindura.
Iwe unotsunga kuverenga aya akanakisa mabhuku naChimamanda Ngozi Adichie?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Mabhuku akanakisa naChimamanda Ngozi Adichie
5 sonnets naFederico García Lorca kupemberera zuva rake rekuzvarwa.
Kubvunzana naLuis Roso, musiki weInspector Trevejo.